कथा Archives - HongKong Khabar
कथा - म नराम्री छु, अरु झैँ हिस्सी परेकी छैन, यस्तो म सोच्छु । म कमजोर भएर, निरीह भएर बकिरहेको छैन कि म नराम्री छु, काली छु । मान्छेले देख्ने गरेको बाहिरी रङ्ग, आवरणलाई लक्षित गरेर भन्दैछु–म नराम्री छु, काली छु, अलिकति आँखा केचो परेकी छु । यद्यपि यी नराम्रैलाई स्विकारेर भन्दैछु–म पूर्ण छु राम्री छु । आम मान्छेको जस्तै मेरो पनि कथा छ। नपत्याउनुस तर मभित्र दन्दनी आगो छ । असार छ, तुषारे शिशिर छ र पनि...
कथा – करालाइनी
किशोर गुरुङ कथाकार किशोर गुरुङले बनाएको स्केच विक्रम संम्वत २०१२ तिर धरान नुन बोक्नु झर्दा भोजपुर, हतुवा दुङबा, चिउरीबास हुदै धरान आईन्थ्यो ।म त्यतिबेला १७ बर्षको अल्लारे लक्का जवान थिएँ ।धरानको फुस्रेमा केही घरहरु भनाैं या सानो बजार थियो । त्यहीँबाट नुनको भारी बोकेर घर फर्किनु पर्थ्यो ।त्यतिबेला धरानमा वास बस्नु भनेको लगभग मृत्युुसँग जुहारी खेल्नु जस्तै मानिन्थ्यो ।धरानमा वास बस्यो भने औल...
साताको तीन कविता – कवि अमृत
पर्वतमा जन्मिएका कवि अमृत आफ्नो पुस्तामाझँ एक प्रेमील कवि हुन । उनका कविताहरुले पाठकलाई मीठो शितलता अनुभव गराउँछ र चिन्तनको संसारमा निक्कै परसम्म धकेल्छ । उनका कविताहरु चुपचाप उभिरहेका पहाडहरुझैँ लाग्छन । नेपाली साहित्यको कविता फाँटमा उनका कविताहरु शान्त र शालिन शब्दहरुको उपस्थिति हो जसले पाठकको मनमस्तिष्कलाई मीठो शितलता प्रदान गर्नेछ प्रस्तुत छ साताको तीन कविता। फेरि अँध्यारोमा तिमी आउ...
कथा-कथाकि पात्र र म
इन्द्र नारथुङे विहानको साढे एघार बजे सुपर किन्ता स्थित द स्टोर अगाडिबाट हामी चार भाइ ट्याक्सी चढ्यौं । चाइनिज न्यू इयरले बजार–सडक जताततै झ्याप्प छोपेको थियो । अन्यत्रको कुरौ छोडौं, किन्ता आसपास रहेका आधा दर्जन नेपाली रेष्टुरेन्टहरुमा समेत खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन । सडक उसै जाम हुने भै हाल्यो । ट्याक्सी ड्राइभरले समेत मौकाको फाइदा उठाउन पछि परेन । गुनिङ लाङसम्मको भाडा पन्ध्र रिङ्गिट हो तर उसले बीस ...
सन्ध्या क्षेत्री कार्की मनु मान्छे छोटो कदकी छिन। पातली हेर्दा चिटिक्क जिउ मिलेको गोरी राम्री । काम गर्नमा पनि खुब जागरिलो छिन । कुनै काम गर्न नाइ नास्ती गर्दिनन । निक्कै अघि बिहे गरेर आउदा सुनाउथिन " घरमा आमा बाबा दिने खाने नै भए पनि घरको जेठी छोरी भएर होला सबै काम गर्नु पर्थ्यो। घर भान्सा मेलापात गाईगोठ इत्यादि आफैले गर्नु पर्थ्यो।" तेहि भएर पनि होला अहिले उनलाई कुनै काम गर्न गाह्रो ला...
कथा : कार्बनफुटप्रिन्ट र शंकाको उत्सर्जन
विजय हितान- मिर्मिरेबिहानिमा : एली कार लिएर बिहानै आइन । हामी लाग्दै गरेको आजको गन्तव्य स्थानको बाटैमा पर्छ मेरो घर । गत शुक्रबार हामीले बनाएका थियौँ सँगै जाने योजना । मेरो झोला कारको पछाडि सिटमा फालेर म अगाडि बसेँ । ‘गुड मर्निङ एली ! कस्ती छौ ? सप्तान्त कस्तो बित्यो ?’ मैले कारको सिटबेल्ट लगाउँदै सोधेँ । ‘चिसो मौसमका कारणले कतै गइनँ । कुकुर डुलाउन बिहान बेलुका डावर नदीको किनारतिर निस्केँ । मा...
केशवराज ज्ञवाली ‘दाइ एकैछिन भेटनुपर्ने थियो ?’ उसले हेलो भन्ने बित्तिकै भन्यो । मलाई उसको आवाज परिचित लागेन । परिचय सोध्न भ्याएकै थिइनँ, फेरि आवाज आयो, ‘दाइले मलाई चिन्नुभएन होला, म श्रवण ।’ मैले अझै चिनिनँ । तर भनेँ, ‘भन्नुस श्रवणजी, केही काम छ कि ?’ ‘दाइले मेरो केसको कथा लेख्नुभएको थियो । त्यसकै सिलसिलामा भेटनु थियो ।’ ‘एऽऽ’ मैले बल्ल बुझेँ । ऊ पक्का पनि मेरो अफिसमा आएको होला । मैले उसलाई मेरा ...
दीप्स शाह आक्कल झुक्कल अफिसको ढोकैमा भेटिंदा म उसका आँखा नियाल्थें । अनगिन्ति अनुहारसंग मेरा आँखा ठोक्किन्छन तर केहि खास अनुहारका खास आँखाहरुले मलाइ तुरुन्तै कैद गर्छन। यसरी मेरा आँखालाइ कैदी बनाउने अत्यन्त सिमित आँखा मध्ये उसका ति दुइ शान्त आँखा पनि थिए । सामान्य चिनाजानी थियो हामी बीच । म त्यो सामान्यलाइ प्रगाढ बनाउने प्रयत्नमा थिएँ । एउटा नजानिँदो आकर्षणको सिर्सिरे बतासले मलाइ हल्का छोए झैं भ...
बाल साहित्य - कथा "ह्या!आज होमवर्क गर्न पनि भ्याइन।अब सरले गाली गर्नु हुन्छ।" "बिहानै उठ्यो आँगन बढार, कुचो लगा, चिया पका, खोले पका, भाडावर्तन मोल आफै।कति हैरान हाऊ! घरको छोरी मान्छे हुनु पनि कति गाह्रो । खाना पनि आफै पकाउनु पर्ने।फेरि भाडा माझ्नु पर्यो।अनि कति खेर फुर्सद हुनु? सबको अगाडि चिया पुर्याइ दिनु पर्ने।खाना पस्किनु बाँढ्नु कामको बोझले होला बेलुका पढौं भन्यो भुसुक्कै निदाइन्छ।" हतार-हता...
ज्योति जङ्गल- बिहानै सामनाले फोन गरेर बोलाएकी थिई ।अत्यन्त उदास स्वर थियो । बोली पनि उसको जस्तै लागेन। “तँ आइज न । तैंले पनि पराई सम्झिस ?” भर्खरै उसले बिहे गरेकी थिई । त्यसको चर्चाले सहर सेलाएकै थिएन । मेरो आदर्शले पनि उसले गरेको बिहेलाई ठीक बेठीक छुट्याउन सकेको थिएन । समाजका कतिलाई त ठट्टा भएको होला कतिलाई झापड जस्तो । आन्तरिक द्वन्दमै म उसको घर पुगेँ । मैले उसको नव दाम्पत्य जीवनलाई जिस्काएंँ,...